Soosaarayaasha Hood Chimney Hood xagasha - Shiinaha
Tilmaamaha: Heerka soo saarista sare ee 380 m³/h oo leh cadaadiska sanqadh hooseeya ee 62dB (A), 3 xawli hawo, badhanka riix.
Iftiinka LED wuxuu sii shaqaynayaa in ka badan 10,000 saacadood.
Tilmaamaha: Qiyaasta soo saarista badan ayaa ku doorta cadaadiska sanqadh hoose ee matoorka Waxtarka Tamarta Heerka laga bilaabo D ilaa A++ 3 xawli hawo leh oo leh kontorool taabashada oo leh shaashad 1 digiti ah.
Dhamaadka Sare ee Naqshadeeyay Hood xagal 708C
Tilmaamaha: Qiyaasta soo saarista badan ayaa ku doorta cadaadiska sanqadha hoose ee matoorka Waxtarka Tamarta Heerka D ilaa A++ 3 xawli hawo leh oo leh badhanka Elektrooniga ah.
Tilmaamaha: Qiyaasta soo saarista badan ayaa ku doorta cadaadiska sanqadh hoose ee matoorka Waxtarka Tamarta Fasalka D ilaa A++ 3 xawli hawo, Kontorool taabasho leh 1 digiti ah.
90cm Atomaatik ah oo xidh Hood xagal nashqadeysan 701
Tilmaamaha: Qiyaasta soo saarista badan ayaa ku doorta matoorka cadaadiska sanqadha hoose
60cm Mashiinka Hood LED Laydhka 736C
Qiyaasta soo saarista badan waxay ku doorataa matoor cadaadis sanqadh hooseeya.
Heerka Waxtarka Tamarta laga bilaabo D ilaa A++.
Dhamaadka Sare Naqshaday RGB Xaglaha Hood 728